ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Saturday, January 14, 2012
ကဗျာလေးမှာအားမာန်တွေ၊ ဆန္ဒတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ တွေ့ ရတယ်..မြို့စားကြီး ပြန်လာတာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျား
i'm glad u r back..
keep going for your mother country ..
ဟုတ်တယ် ... ပြန်လိုချင်တာ အဲဒီတခုထဲပဲ ....
စာကို ဒီလောက်မြန်မြန်ရေးတာလည်း ဝမ်းသာတယ်။
ထိတယ်ဗျာ.. မြန်မြန် ဖန်တီးနိုင်လို့ ၀မ်းသာတယ်။ ဒီထက်မကလဲ ဖန်တီးနိုင်ပါစေ..အကို ..။
အရမ်း ၀မ်းသာမိပါတယ် .. လိုချင်တဲ့အရာတွေနဲ့လည်း မဝေးတော့ဘူးလို့ ယုံကြည် မျှော်လင့်မိပါတယ် .. (ပေးဆပ်ထားရတာတွေလည်း နည်းမှ မနည်းတော့ပဲကိုးနော် ..း))
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော် ရယ် သံလွင်အိပ်မက်တွေရယ်ကို အမြန်ဆုံး ရုပ်လုံးဖော်နိုင်ပါစေ ..း))
ထင်ထားတာထက် မြန်မြန်ဖတ်ခွင့်ရလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..။ စိတ်ရောလူရောအလန်းဆန်းဆုံးဖြစ်အောင် အနားယူပြီးရင် နောက်ထပ်စာတွေအဆက်မပြတ် ဖတ်ခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်..။
အကိုလွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်ကို ပြန်လည်ပွေ့ဖက်ခွင့်ရတာ တွေ့ရတဲ့အတွက် အရမ်းကို ဝမ်းသာပါတယ် ခင်ဗျာ။ Facebook မှာလည်း ဆုံတွေ့ချင်ပါသေးတယ်။
ပြောစရာ.. ရေးစရာ.. တွေးထားတာတွေ ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ မဆံ့လောက်အောင် များနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
ရေးသမျှဖတ်ဖို့၊ ပေးသမျှယူဖို့ ပရိသတ်ကြီး မျှော်နေပြီ..။
ကျန်းမာချမ်းသာစွာဖြင့် လူထုတာဝန်များ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေ..။
welcome from online blog place. please come also to Facebook brother.
လွတ်ကျခဲ့တဲ့ မြို့တော်ကို ဆက်လက်အသက်သွင်းဖို့ အားမာန်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့အကို အစဉ်အမြဲလေးစားလျှက်ပါ
လိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိဖို့ ရပ်တန့်မနေဘဲ ဆက်ကြိုးစားကြတာပေါ့.. အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် မြို့စားကြီးး)
၈၈ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများ အင်္ဂလန် မှ ကိုနေဘုန်းလတ် နေကောင်းကျမ္မာစွာဖြင့် အေးချမ်းစွာချစ်သောမိသားစုနှင့် ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် မိမိတတ်ကျွမ်းသော ခံစားမှု အနုပညာအားဖြင့် ၁၃၊၁၊၂၀၁၂ရက်နေ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာချိန်မှသည် အမြဲထာဝရ ဆက်လက် ကြိုးစားအားထုတ်နေမည်ဟု အခိုင်အမာယုံကြည်လျှက် ဒီနေရာ ဘလောဒ်ကနေ လေးစားစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
အစကတည်းက ကိုယ့်နေရာ... ။ ဒါကြောင့်လည်း ရောက်ဆို ချက်ချင်းပြန်လာတာ..မဟုတ်လား။
Welcome back Ko Nay Phone Latt!!!
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ စာတွေပြန်ရေးတော့ ဝမ်းသာစွာနဲ့ ဖတ်သွားတယ်။
New Burma Foundation said...
Welcome Back Ko Nay Phone Latt!!
We are very happy that you can write back on your blog that's treasure to us....
တစ်နေ့နေ့တော့တစ်နေ့နေ့ပါပဲ ကိုနေဘုန်းလတ်။ ဒီလောက်မြန်လိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ထားဘူး။
ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လာတာ တွေ့ရလို့ တကယ်ပဲ ဝမ်းသာတယ်ဗျာ၊ မြို့တော်ဟာ လွတ်ကျခဲ့တဲ့ နေရာက မရွေ့ဘဲ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို သစ္စာရှိစွာ စောင့်နေခဲ့ ပါတယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ကျနော်တို့အားလုံး လိုချင်တာ အဲဒီ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းသော ကမ္ဘာသာလျှင် ဖြစ်တယ်..၊
အားနဲ့မာန်နဲ့ အပြန်ခရီးကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ် အကိုရေ...။
သည်နေ့လိုမွေးနေ့မှာ မှတ်မှတ်ရရ နေဘုန်းလတ်ရဲ့
နေဘုန်းလတ်ရဲ့ “လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်” မှာအကျိုးရှိတဲ့
“ လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနုပညာ ” ပွဲမှာ ကိုနေဘုန်းလတ်ရဲ့ ရင်ထဲက အသံတွေကို နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားခွင့်ရလိုက်လို့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျေနပ်မိတယ်။ “ လွတ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အနုပညာ ”
အစ်ကို့ နာမည်ကိုတော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီး ကြားဖူးပေမယ့် စာတွေကိုမဖတ်မိခဲ့ဘူး ။။။ ဒီကဗျာလေးဖတ်မိတော့ တော်တော်ကို လေးစားမိပါတယ် ... ၁၃ရက်နေ့ ကဓာတ်ပုံကို facebook ပေါ်မှာတွေ့ လိုက်ရတော့ တော်တော်လေးကိုပျော်မိတယ် ... ယုံကြည်ချက်တွေတကယ်အကောင်ထည်ဖော်နိုင်မှာပါ ....
Welcome back.. Ko Nay Phone Latt..